Raage Ugaas - Wikipedia
Raage Ugaas Warfaa markii dambe noqdey Ugaas Raage Ugaas Warfaa wuxuu ahaa ugaas, hogaamiye, gabayaa, halabuur, dagaalyahan Soomaaliyeed kaasi oo noolaa wakhti lagu qiyaaso badhtamihii qarnigii 19aad. Raage Ugaas wuxuu ku dhashay ceelka Sasabane, meel u dhow magaalada Dhagaxbuur, Gobolka Soomaali Galbeed ee wadanka Itoobiya. Raage waxaa dhalay Ugaas Warfaa Faaraxa Samatar oo ahaa Ugaaska Beelaha Gadabuursiga, waxaa la dhashay labo wiil oo ka weynaa kuwaasi oo kala ahaa Ugaas Xuseen iyo Xilkab.
Si kastaba ha ahaatee, Ugaas Raage wuxuu yaraantiisii ku soo caanbaxay tirinta gabayga, iyo helida ereyo aad u dhumuc weyn.
2.1 Gabayga Alleyl dumay
2.2 Raage Ugaas iyo Garaad Wiilwaal
3 Gabayada Raage Ugaas
Wakhtiyadii uu kureyga ahaa ayuu Raage Ugaas bilaabey inuu tiriyo tixo gabay ah. Inta la hayo maanta gabayadii ugu horeeyay ee Raage Ugaas waxaa ka mid ah ereyadan:
Aw-Muuse waa hoorin jirey, hadal nin waayeel ah Ina-Looti baan la hinjin karin, heeladkuu dhigaye Odawaa Dhugeed baa hantiyey, hibadii geeraare Anna hooto ridey gabay hadduu, haybad leeyahaye Dhallinyarada haatana ma jiro, Hawle oo kale'e .
Ugaas Raage wuxuu ahaa haldoor Soomaaliyeed kaasi oo lagu xasuusto gabayo, sheekooyin iyo dhacdooyin xiiso leh oo uu ka tagay. Sidoo kale, markii uu geeriyooday walaalkii Ugaas Xuseen waxaa la caleemo saaray Ugaas Raage oo qabtay talada Ugaasnimo ee beelada Gadabuursi taasi oo uu hayay ilaa horaantii qarnigii 20aad. Dhinaca kale, Ugaas Raage wuxuu noolaa wakhtiyadii uu Garaad Faarax "Wiilwaal" ka talin jirey deegaanada Ogaadeeniya. Sheekooyinka inbadan waxaa lagu sheegay xifaaltan iyo tartan dhexmaray Ugaas Raage iyo Wiilwaal, kuwaasi oo ku dagaalamayay gabadh qurux badneyd. Raage Ugaas gabayo badan ayuu ka tiriyay jeceylka gabadhaasi. Waxaana la sheegay inuu markii dambe dilay Garaad Wiilwaal.
Gabayga Alleyl dumay
Raage Ugaas ayey gabadhi u doonanayd, gabadhaasoo qurux Illaahay ku manaystay. Raage gabadhu way madax qaaday, oo aad buu u jeclaa. Waxaa gabadhii loo meheriyay Faarax Wiil-waal. Warkii markuu Raage soo gaadhay ayuu jiif iyo joogba diiday, kadibna tiriyey gabaygan la magacbaxay Alleyl Dumay.
Alleyl dumay albaabadoo laxidhay, uunkoo wada seexday
Onkad yeedhay uugaama roob,  alif banaadiikh ah
Iihdayda bixibaa libaax iman lamoodaaye
Raggase adhaxda iyo ooftu waa udub dhexaadkiiye
Labadii waxlaga eegijiray waan ka awdnahaye
Halkaan aa ka leeyahay Illaah kaliya uun baa og
Aboodigu malalo garab haduu iin ku leeyahaye
Orod uma holado ooglihii adhaxda beelaaye
Ma aarsado il iyo oof nimay iimi kaga taale
Aroos uma galbado nimuu wadnaha arami jiifaaye
Geeluba markuu oomo wuu ollol badnaadaaye
Sidii inan yar oo hooyadeed aakhirow hoyatay
Oo aabeheed aqal midkale meel illina seexshay
Hadba waxaan la urugoonayaa uurkutaalada e
Ninka illo biyaleh soo arkoo ooman baan ahaye
Ninka ooridiisii nin kale loo igdhaan ahaye
Nin abkii Ogaadeen yahoo aarsan baan ahaye
Afdhabaandhow aayar ninkaa aamusaan ahaye
Raage Ugaas iyo Garaad Wiilwaal
Raage markuu gabaygaa mariyay, ayuu odaygii gabadha dhalay siin iyo meher isugu daray da'dii ka yarayd gabadha oo aan ayadu waxba ka liidanin tan weyn. Si kastaba ha ahaatee, Raage iyo Faarax waxay inalayaal u noqdeen reerkii ay gabdhaha kaqabeen. Maalin maalmaha kamid ah ayuu Faarax Wiil-waal haweenaydiisa usheegay inay sifiican usoo labisato, soona kaxayso walaasheeda ka yar oo ah xaaska Raage, dabadeed ku soo agmaraan dulleed ka reerka. Faarax intuu u yimid Raage ayuu ku yidhi war inakeen aan duleedka shax kusoo ciyaaree, kadibna waa laysraacay. Ayagoo shaxaya ayaa dumarkoodii soo kor mareen, dabadeed waxaa la'is waydaarsaday tixahan halgaada ah:
Geenyada nin lihi qoofashee qollolka meeraysa
Qiyaasli'i ninkii ugu tagow qoomamaa xigiye
Manala qoonsanaayaa haday fuulmo nooqabato
Kannaan dagay, Kannaan doorbiday, Kannaan dan mooday
Qumbe subaga oo meel qotoma oo nin lihi quuto
Qooraansigiisaa kuugu daran quud aan lacunaynin
Qumbe malaba oo meel qotoma oo rag wada quuto
Ma nalagu qoonsanaayaa haday gaajo noo qabato
Nin adoogi dhawr qaalin dhalay qolona kaa fiican
Ma lagu qoonsanaayaa haduu gabadhi kaa qaaday
Nin adoogi dhawr qaalin dhalay qolona kaa liidan
Mala qoonsanaayaa haduu rubadda kaa qaado
Raage intuu ablaydii iska gooyey ayuu Faarax laba u kala gooyey, dabadeed gabadhuu jeclaa ee xilaha u ahayd Faarax ayuu faras kiisa ku ritay, lana tagay oo reerkoodii la aaday.
Gabayada Raage Ugaas
Sidaan horay u soo sheegnay, Raage Ugaas wuxuu leeyahay tiro badan oo gabayo, maanso iyo halabuur ah; kuwaasi waxaa ka mid ah:
Bishu waa 30
Sarsar Igu Banaanaa
Ardaal Nacas ah
Awood iyo xoog
Siddii Koortii Yucub
↑ Deegaanka Sasabane waa meesha uu ku dhashay Raage Ugaas
↑ Raage Ugaas, halabuurka horaantiisa ~ doollo.com
↑ Raage Ugaas & Wiilwaal: Dagaalkii Jacaylka
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Raage_Ugaas&oldid=167448"
Last edited on 14 Maarso 2017, at 05:15
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Maarso 2017, marka ee eheed 05:15.